How much do you know about Mood? – DR NU MYAT THEINGI OO
DR NU MYAT THEINGI OO
ဒေါက်တာနုမြတ်သိဂီင်္ိဦးဧ။် ဆောင်းပါးများ စုစည်းရာ
Timeframe for Prevention of headaches
14 reasons to eat nuts
How much do you know about Mood?
What color should you wear today?
ကိုယ်ကထွက်တဲ့ အနံ့တွေအကြောင်း သင်ဘယ်လောက်သိပါသလဲ
HOW MUCH DO YOU KNOW ABOUT EXERCISE?
ဓမ္မတာရာသီစက်ဝန်း အလိုက် အလှအပ ထိန်းသိမ်းနည်းများ
မိ တ် က ပ် အကြော င်း သိ ကောင်းစ ရာ အ ဖြာ ဖြာ
အလှကုန်ပစ္စည်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သင်ဘယ်လောက်သိပါသလဲ
မျက်နှာလေး နုပျိုဖို့ ယောဂကျင့်ကြစို့
Shopping ထွက်ရာမှာ သိသင့်သောအချက်များ
Tips for singing better
4 ways for smarter kids
ကိန္ဒရီ ကိန္ဒရာမြို့တော်လွိုင်ကော်ရောက် နေ့ရက်များ
ပုံပြင်ထဲက မြို့လေးလား ထင်မှတ်မှားရသည့် ဥရောပမှ ရေပေါ်မြို့လေး Bruges
ကျူးလစ်ပန်းရောင်စုံများပွင့်လန်းရာ နယ်သာလန်ရှိ ပန်းဥယျာဉ်ကြီး
ကျွန်မနှင့် ဆွစ်ဇာလန် ထောင်တွင်းနှစ်ညတာ
ရွှေသမင်တို့၏ မြို့တော် နာရာသို့ အလည်တစ်ခေါက်
ကမ္ဘာ့ အံ့ဖွယ် ဂရန်းကင်ညွန် ချောက်ကမ်းပါးကြီး
ကမ္ဘာတလွှားမှ စုံတွဲများ Honey Moon ထွက်ရာ Maldives ကျွန်းနိုင်ငံသို့ အလည်တစ်ခေါက်
Australia မှ Puffing Billy ရေနွေးငွေ့သုံး ရှေးဟောင်းအပျော်စီး မီးရထားလိုင်း
သဘာဝအလှအပတွေကြား Adventure အစုံလုပ်လို့ရတဲ့ ကမ်းခြေမြို့လေး ကိုတာကင်နာဘာလူ
ဒူဘိုင်း သဲကန္တာရအတွင်းမှ သဲထိပ်ရင်ဖို အတွေ့အကြုံများ
Nu Myat around the World ခရီးသွား blog
Beauty Pageants Training
My Blogs and My Pages
My Travel Blog, Nu Myat around the World
Nu Myat around the World Facebook Page
Nu Myat around the World Instagram
Posted on February 3, 2017 by Nu Myat
၁။ တေးဂီတက စိတ်ခံစားမှုကို အမြဲကောင်းမွန်စေနိုင်တယ်
အဖြေ (ခ) မှား
တေးဂီတက စိတ်ခံစားမှုကို ကောင်းမွန်စေနိုင်တာမှန်ပေမဲ့ သင်နားထောင်တဲ့ ဂီတ အမျိုးအစားပေါ်မူတည်ပါသေးတယ်။ လေ့လာချက်အရ ဂီတပညာရှင်မိုးဇက်ရဲ့ ဂန္ထ၀င်တေးသွားနားထောင်သူတွေရဲ့ စိတ်ခံစားမှုတေါပိုမိုကောင်းမွန်နေတာမျိုးတွေ့ရပေမဲ့ တချို့တူရိယာဂီတနားထောင်နေစဉ်မှာ ပုံမှန်အတိုင်းဖြစ်နေတာမျိုးတွေ့ရပါတယ်။ ခြောက်ခြားဖွယ်ဇာတ်ကားတွေရဲ့ ဇာတ်ဝင်တေးသွားတွေ နားဆင်ရတဲ့ အခါမျိုးမှာ ပိုလို့တောင်ဆိုးရွားနေတာကိုလည်း တွေ့ရပါတယ်။
၂။ ဒီထဲက ဘယ်အစားအစာက စိတ်ခံစားမှုကောင်းစေနိုင်သလဲ
အဖြေ (ယ) အပေါ်ကအစာအားလုံး
သံလွင်ဆီများစွာစားသုံးသူတွေမှာ စိတ်ကျရောဂါဖြစ်နိုင်ချေနည်းတာမျိုးတွေ့ရပါတယ်။ ဆယ်လ်မွန်ငါးနဲ့ Walnut တွေကတော့ စိတ်ခံစားမှုကောင်းစေတဲ့ အိုမီဂါ ၃ ဖက်တီးအက်ဆစ်တွေ များစွာ ကြွယ်ဝနေပါတယ်။ တချို့လေ့လာချက်တွေအရ ကယ်လိုရီများစေတဲ့ အ၀စာတွေက စိတ်ညစ်မှုကိုပယ်ပျောက်စေနိုင်တာကြောင့် စိတ်ညစ်ရင် ပိုပြီး အစာစားမိတာမျိုး ဖြစ်တတ်ကြပါတယ်။
၃။ သူစိမ်းတွေနဲ့ ပြောဆိုဆက်ဆံခြင်းက သင့်စိတ်ကို ဘယ်လိုဖြစ်စေနိုင်သလဲ
(က) ဘာမှ မဖြစ်စေဘူး
(ယ) ပြောနေတုန်းတော့ပိုကောင်းစေပေမဲ့ ပြီးရင် ပိုဆိုးသွားရော
အဖြေ (ဂ) ပိုကောင်းစေတယ်
သူစိမ်းတွေနဲ့ စကားစမြည် ပြောဆိုခြင်းက စိတ်ခံစားမှုကို ပိုကောင်းစေနိုင်ပါတယ်။ ကျွန်မတို့ရဲ့ မသိစိတ်က သူစိမ်းတွေရှေ့မှာ လူအထင်ကြီးအောင်နေတတ် ပြောဆိုတတ်ပြီး ရွှင်ပြလေ့ရှိတာကြောင့် စိတ်ခံစားမှုကိုပါ ပိုပြီး ကောင်းစေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
၄။ ဘယ်လိုစ်ိတ်အခြေအနေမျိုးရှိနေချိန်မှာ လူတစ်ယောက် လိမ်နေတာကို ဖမ်းမိသိရှိနိုင်မလဲ။
(ဂ) ပုံမှန် စိတ်အခြေအနေ
အဖြေ (ခ) စိတ်ကောင်းမ၀င်ချိန်
လူတွေစိတ်ကောင်းဝင်နေချိန်မှာ အယုံလွယ်တတ်ကြပြီး စိတ်ကောင်း မ၀င်ချိန်မှာတော့ သံသယတွေ ကြီးစိုးနေတတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် စိတ်ကောင်းမ၀င်တဲ့သူတွေ စိတ်တိုစိတ်ဆိုးနေသူတွေက ကိုယ့်ကိုယ် သူများလိမ်လည်လှည့်ဖြားနေတာကို ရိပ်စားမိတတ်ကြပြီး စိတ်ကောင်းဝင်သူတွေ ပျော်ပျော်နေတတ်သူတွေကတော့ လွယ်လွယ်နဲ့ အရူးလုပ်ခံကြရပါတယ်။
၅။ စိတ်ခံစားမှုတွေက ကူးစက်တတ်တယ်။
လေ့လာချက်တွေအရ ပျော်ရွှင်တဲ့သူတွေအနီး နေထိုင်သူတွေဟာ ပျော်ရွှင်မှုတွေ ကူးစက်နေတတ်ကြပြီး စိတ်ဓာတ်ကျနေသူတွေနဲ့ ပေါင်းသင်းနေထိုင်ပါက ကိုယ်ပါလိုက်ပြီး စိတ်ဓာတ်ကျနေတတ်ပါတယ်။ လူတွေရဲက ပျော်ရွှင်မှုဆိုတာ သူတို့နဲ့ ပတ်သက်ဆက်နွယ်နေသူတွေရဲ့ ပျော်ရွှင်မှုနဲ့ ဆက်စပါ၏်နေတတ်ပါတယ်။ လူတစ်ယောက်ကို အား၇ပါးရ နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက်ကြီး ပြုံးပြပါက အပြုံးခံရသူမှာပါ အပျော်တွေကူးစက်သွားတာ အသိသာကြီးပါ။
၆။ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်းက စိတ်အခြေအနေကို ဘယ်လိုပိုကောင်းစေသလဲ။
(က) neuron အသစ်တွေဖြစ်ပေါ်စေခြင်းအားဖြင့်
(ခ) ဦးနှောက်ထဲ သွေးပိုေ၇ာက်စေခြင်းအားဖြင့်
(ဂ) ဒိုပါမင်း ဟော်မုန်းပိုများစေသောအားဖြင့်
(ယ) အပေါ်က အချက်အားလုံး
အဖြေ (ယ) အပေါ်က အချက်အားလုံး
ဟုတ်ပါတယ်။ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်းက ဦးနှောက်ထဲ ဦးနှောက်ဆဲလ်တွေကို အသစ်ဖြစ်ပေါ်စေသလို ဦးနှောက်ဆီလည်း သွေးရောက်ရှိမှုလည်း ပိုကောင်းမွန်စေကာ စိတ်ခံစားမှုကောင်းစေတဲ့ ဆီရိုတိုနင်နဲ့ ဒိုပါမင်ဟော်မုန်းတွေလည်းထွက်ရှိစေပါတယ်
၇။ လူတွေဟာအသက်ကြီးလာလေ စိတ်တိုစိတ်ဆိုးလွယ်လေပဲ။
လူတွေဟာ အသက်ကြီးလာလေ သည်းခံနိုင်စွမ်းများလာပြီး အကောင်းမြင်လာလေပါ။ သူတို့နေရမယ့်နှစ်တွေ အချိန်တွေ သိပ်မကျန်တော့ဘူးဆိုတာကို သတိထားမိလာတာကြောင့် မသိစိတ်ကရော အသိစိတ်ကပါ ကောင်းတာလေးတွေပဲတွေးပြီး ပျော်ပျော်နေတတ်လာတာပါ။
၈။ ဆေးလိပ်သောက်တတ်သူတွေ ဆေးလိပ်ဖြတ်တဲ့ အချိန်မှာ စိတ်ခံစားမှုမကောင်းတတ်ကြဘူး။
ဆေးလိပ်ဖြတ်ဖို့ကြိုးစားနေချိန်မှာ အခ့ရခက်တာမှန်ပေမဲ့ တကယ်တန်းပြတ်သွားပါက ပိုပြီးတောင် စိတ်ကြည်လင်လန်းဆန်းနေမှာပါ။ ဒါပေမဲ့လည်း ဖြတ်ဖို့ကြိုးစားပေမဲ့ တကယ်တန်းမဖြတ်နိုင်တဲ့ အခါမျိုးမှာတော့ စိတ်အခြေအနေ ပိုဆိုးနေတတ်ပါတယ်။
၉။ စိတ်ကောင်းဝင်နေချိန် ဒီလိုဖြစ်နေတတ်တယ်။
(ယ) အပေါ်က အချက်တစ်ချက်မှ မဟုတ်
အဖြေ (ခ) အယူသီးတတ်
လေ့လာချက်အရ စိတ်ကြည်လင်နေသူတွေဟာ စိတ်မကြည်သူတွေထက်စာရင် ပိုလို့ အယူသီးနေတတ်တာကို တွေ့ရပါတယ်။ ပျော်ရွှင်နေသူတွေဟာ လက်တွေ့ကျကျမကျကျ မသိစိတ်ကို အလိုကိုလိုက်တတ်ကြတာကိုလည်း တွေ့ရပါတယ်။ ဘာကြောင့်လည်းဆိုတော့ သူတို့ စိတ်ထင်ရာလုပ်ခဲ့တာတွေက သူတို့ ကို ပျော်ရွှင်စေတာကြောင့်ပါ။
၁၀။ ရာသီဥတုက စိတ်အခြေအနေကို ပြောင်းလဲစေနိုင်တယ်။
အဖြေ (က) မှန်
ဟုတ်ပါတယ်။ နေသာချိန် နေရောင်မြင်ရချိန် စိတ်တက်ကြွလန်းဆန်းနေတတ်ပြီး မိုးအုံ့ တိမ်ထူရင် စိတ်ကပါ မှိုင်းနေတတ်ပါတယ်။ နေအရမ်းပူနေချိန်မှာတော့ စိတ်တိုစိတ်ဆတ်ဖြစ်လွယ်ကြပါတယ်။
Posted in Health, Quiz, UncategorizedTagged Dr Nu Myat, Health, Quiz
Join 30,485 other followers
Dr Nu Myat Theingi Oo’s Facebook Page
Dr.Nu Myat is the chief editor of The Chic Magazine
Recent Posts: NU MYAT AROUND THE WORLD
ဥရောပတိုက်နဲ့ အာရှတိုက် နှစ်ခုကိုခွထားတဲ့ Istanbul မြို့လေး
Patom Organic Living in Bangkok
Denmark မြို့တော် Copenhagen
Lotte World Tower, the Highest Glass Floor
Darlene Maxwell on မိ တ် က ပ် အကြော င်း သိ ကောင…
Kitty Navarro on မိ တ် က ပ် အကြော င်း သိ ကောင…
Alex on မျက်နှာလေး နုပျိုဖို့ ယောဂကျင်…
Follow DR NU MYAT THEINGI OO on WordPress.com
View Nu Myat Theingi Oo’s profile on Facebook
View nu_myat’s profile on Instagram
View Nu Myat Theingi Oo’s profile on LinkedIn